इपिएल क्रिकेट : ललितपुर प्याट्रियट्स विजयी « प्रशासन
इपिएल क्रिकेट : ललितपुर प्याट्रियट्स विजयी
३ पुस २०७४, सोमबार
काठमाडौं । राजधानीमा आजदेखि शुरु भएको एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपिएल) टि–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा ललितपुर प्याट्रियट्स विजयी भएको छ ।
कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा टस जितेर बलिङ रोजेको ललितपुरले काठमाडौं किङ्स इलाभेनलाई सात विकेटले पराजित गरेको हो । काठमाडौंले दिएको ९० रनको लक्ष्यलाई ललितपुरले १६.३ ओभरमा तीन विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो ।
ललितपुरका लागि भारतीय खेलाडी जयकिसन कोल्सावालाले अविजित ४४ रनको योगदान दिए । उनले ४७ बलमा दुई छक्का र चार चौका प्रहार गरे । कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले २० र राजवीर सिंहले १४ रन बनाए । बलिङतर्फ काठमाडौंका लागि श्रीलंकन खेलाडी अक्षु फर्नाण्डोले दुई तथा सोमपाल कामीले एक विकेट लिए ।
त्यसअघि ब्याटिङ गरेको काठमाडौंले १८।३ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै ८९ रन बनाएको थियो । काठमाडौंका लागि अमित श्रेष्ठले सर्वाधिक २७ रन जोडे । उनले २८ बल खेल्दै चार चौका प्रहार गरे । अक्षु फर्नाण्डोले १५, सोमपाल कामी १४ तथा कप्तान महरुफ फरवेज र सुबोध कुमारले सात/सात रन बनाए ।
बलिङतर्फ ललितपुरका लागि सुबोध भाटीले चार, ललितनारायण राजवंशीले तीन, मेहबुव आलमले दुई र योगेश नागरले एक विकेट लिए । प्रतियोगितामा ललितपुरका ललितनारायण म्यान अफ दी म्याच घोषित भए । उनले रु १० हजार पुरस्कार पाए ।
मंगलबार पहिलो खेल चितवन टाइगर्स र पोखरा राइनोजका बीच तथा दोस्रो खेल विराटनगर वारियर्स र ललितपुर प्याट्रियट्सका बीच हुनेछ । प्रतियोगिताको विजेताले २१ लाख पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ ।
Tags : ललितपुर प्याट्रियट्स
23 January, 2022 11:57 am
प्रदेश तेक्वान्दो सङ्घद्वारा डा. पाँडेलाई सम्मान
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश तेक्वान्दो सङ्घले डा. सिद्धार्थ विक्रम पाँडेलाई
23 January, 2022 11:40 am
आगामी वर्षको बजेटमा खेलकुद विकासमा निजी क्षेत्रको सहकार्य प्रवर्द्धन गर्छाैँ: डा. रेग्मी
काठमाडौँ । सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने सोच
23 January, 2022 7:45 am
कास्की । सशस्त्र प्रहरीको नेपाल एपिएफ फुटबल क्लबले पोखरामा जारी